Accueil > Gazetin'ny nosy > Resaka pesta: Tsaho niely nampisahotaka an’Antananarivo
Resaka pesta: Tsaho niely nampisahotaka an’Antananarivo
Mora andairan’ny tsaho ve ny Malagasy sa ny fitondram-panjakana mihitsy no tsy ampy serasera ka lasa mora mino ny resaka mandeha sy miparitaka etsy sy eroa ny mponina ? Raha ny hita teto Andrenivohitra sy ny manodidina aloha omaly dia nisahotaka tanteraka ny ray aman-drenin’ny mpianatra tamin’ireo sekolim-panjakana sy sekoly tsy miankina maro, na ny teto amin’ny kaominina Antananarivo Renivohitra na tany amin’ireo kaominina manodidina, noho ny tsaho niely fa hoe misy ny olona izay mitonona ho mpiasan’ny ministeran’ny Fahasalamana miaraka amin’ny mpitandro filaminana maromaro no mitety sekoly ary manao vaksiny an’ireo ankizy mpianatra hita fa ambony ny hafanan’ny vatana ka mety voan’ny aretina pesta. Tamin’ny ankapobeny dia tamin’ireo EPP no tena nisehoan’izay savoritaka izay, nanomboka maraina hatramin’ny hariva. Tsy fantatra mazava moa ny tena nipoiran’ity tsaho niely ity fa ny azo antoka aloha dia tao anatin’ny fotoana fohy monja dia niparitaka eran’Antananarivo izany ka nihazakazaka namonjy ny sekoly misy ny zanany daholo ny ray aman-dreny. Anisan’ny nahitàna izay sahotaka izay moa ny tetsy amin’ny EPP Ambatomaro, Nanisana, Analamahitsy, Avaradoha, Andranomanalina, Andavamamba, Analakely, hatrany Ampitatafika sy Ambavahadi-
tokana Itaosy. Marihana fa tsy dia ilay feo nandeha fa hoe misy ny mpiasan’ny fahasalamana mitety sekoly ary manao vaksiny ny mpianatra no nanaitra sy nampisavoritaka ireo ray aman-drenin’ny mpianatra fa ny tsaho niely ihany fa hoe nisy tamin’ireo mpianatra izay notsondromina na natao vaksiny no maty. Vao nahare izany ny ray aman-dreny dia nihazakazaka naka ny zanany tany an-tsekoly daholo. Teo no niteraka ny savoritaka satria tsy nanaiky mora ny nangalana ireo mpianatra tao an-dakilasy ny tompon’andraikitra ny sekoly sy ny mpampianatra. Ireto farany izay mazava ho azy fa niezaka nanazava tamin’ireo ray aman-drenin’ny mpianatra fa tsy marina ary tsy misy velively izany hoe mpitsabo miaraka amin’ny mpitandro filaminana manao vaksiny izany. Tsy nino izany anefa ny ankamaroan’ireo ray aman-dreny ka naka ny zanak’izy ireo an-keriny. Raha ny tetsy amin’ny EPP Avaradoha ohatra dia tsy nety nanokatra ny vavahadin’ny sekoly ny tompon’andraikitra saingy novahan’ireo ray aman-dreny an-keriny. Ora maromaro taty aoriana, rehefa nisahotaka tanteraka i Antananarivo vao namoaka fanambarana ny eo anivon’ny ministeran’ny Fahasalamana ary nilaza mazava fa tsy misy ary tsy marina velively izany mpitsabo mitety sekoly izany ka manao vaksiny an’ireo mpianatra ahiana ho voan’ny pesta fa tsaho nahely fotsiny izany ka tokony ho tony ny mponina rehetra. Namoaka fanambarana ihany koa ny teo anivon’ny zandarimariam-pirenena ary nanamafy fa tsy misy izany zandary manaraka mpiasan’ny fahasalamana izany ka mitety sekoly eto Antananarivo. Ny trangan-javatra toy izany moa dia mampiseho fa tsy matoky firy ny fanjakana intsony ny vahoaka. Na inona nambara na inona ady hevitra dia tsy azo lavina fa tsy ampy mihitsy ny serasera sy ny fanazavana avy amin’ny fanjakana mikasika ny ady atao amin’ity aretina pesta ity ka na ny vahoaka aza lasa mora andairan’ny tsaho miely etsy sy eroa, indrindra fa amin’ny tambazotran-tserasera sosialy. Tsara ihany ny mampahatsiahy fa tsy vao sambany teto amintsika no nampisahotaka ny vahoaka tahaka izao ny tsaho miely fa tany amin’ny andron’ny repoblika voalohany dia nalaza sy niteraka resabe be ihany koa ny hoe fisian’ny mpaka rà sy mpaka fo. Tany amin’ny fiandohan’ny taona 80 tany koa dia nisy an’ilay nantsoina hoe “opération 40 000”, ka tamin’izany fotoana izany dia niely ny tsaho fa misy ireo andian’olona maka ny taovam-pananahan’ny lehilahy sy ny nonom-behivavy.